UNES Archives - Tamban RELAY
Europe inotanga Boeing 737 Max bvunzo ndege
bryamangwanabe Nyamavhuvhu 28, 2020 0
Europe inotanga Boeing 737 Max bvunzo ndege dzekufamba ndege dzeEuro dzakaronga miedzo yekubhuroka yendege yeBoeing inodonhedza 737 Max. European Union Aviation Safety Agency (EASA) ine…
Mumiriri akasarudzika kubva kuMiss France yekupfeka akashama nechikonzero chakanakisa
bryamangwanabe Nyamavhuvhu 27, 2020 0
Mumiriri akasarudzika kubva kuna Miss France nekumira asina kupfeka chikonzero chakakodzera Kusvikira kurongeka kutsva, makwikwi haatenderi mafoto asina kupfeka, kunyangwe chikonzero chakanyanya kunaka. Ndichagara ndichiramba ndichidzivirira ...
Mushure meUnited States, United Kingdom neAustralia, India inozivisa…
Chinde Nyamavhuvhu 15, 2020 0
United States, United Kingdom neAustralia zvakasimudzawo kushushikana nezvekufungidzirwa kwekutyisidzira kuchengetedza makambani eChina tech. Makambani ekuChina Huawei Technologies Co uye ZTE ...
Kusawirirana pakati peGreek neTurkey: France iri kutora chikamu!
ALEXIS WAYAN Nyamavhuvhu 13, 2020 0
France yakaendesa kwenguva pfupi mauto maviri eRafale uye ngarava mbiri dzekumabvazuva kweMedithera pakati pemakakatanwa pakati peGreek neTurkey pamusoro pekubatwa kwegesi, yakaziviswa neChina, Nyamavhuvhu 13 ...
Belarus: kuparara pane varatidziri kunoenderera ...
Kudzvinyirira kuri kuenderera mberi vachipokana nevaratidziri vanopokana nesarudzo, nekunyepedzera maererano nezvaAlexander Lukashenko, mutongi akatonga nyika kwenguva inopfuura kotara yezana. Ministry of the Interior yazivisa, China 13…
Ernest Obama nyaya: "Amougou Belinga anofanira kunge aine hutsinye uye achiomesa," anofunga Dieudonne…
Anotenda kuti neiyi chete nzira muzvinabhizinesi anozogona kudzivirira makambani ake kubva mukuedza kwakaipa. Maitiro ari kuwanda nezve kubvunzwa kwe…
Paris La Défense Arena: "Reprogram Céline Dion kana Iron Maiden, mutambo wevabati"
Nhaurirano "Isu takanga tiri vekutanga kusungwa uye isu tiri vekupedzisira kuvhurwa," anodaro Bathilde Lorenzetti, mutevedzeri wemutungamiri weParis La Défense Arena. Kubva munaKurume 7, hapana chiitiko chakaitwa muButs-de-Seine Hall…
E. Obama: dzinza mugehena remwana akapambadzwa.
Kudzingwa kwaErnest Obama kubva kune chinzvimbo chakakurumbira chemaneja weterevhizheni akazvimirira, Vision 4, kuenderera mberi nekupfutisa mweya yenyika. Hapana chaifananidzira iyi yekushongedza kusingawanzo June 18 iyi padzimbahwe ...
Amougou Belinga aramba kukanganwira Ernest Obama
Nhau dzeCamerooni kubva kukona d Mutungamiriri weboka reL'Anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga anotarisira kuenderera mberi nedanho repamutemo, raakatanga kupokana nezvake ...
Cameroon - Ernest Obama nyaya: "Vision 4 madinosaurs" "kuroverera Ernest Obama pa ...
Muvhuro uno, June 22, 2020, pane chirongwa chechirongwa ichi, aimbove Director General weVision 4 cheni akadyiwa ari mbishi. Kubhowa kweaimbove Director General weVision4, Ernest Obama, kunoenderera mberi nemhepo…